INDLU YEPAKI: Iflethi ene-1080m yokuzonwabisa noxolo - I-Airbnb
INDLU YEPAKI: Iflethi ene-1080m yokuzonwabisa noxolo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVânia
Chitha iintsuku zakho kule paradesi yabucala: INDLU YEPAKI. Ukonwabela ukuzola kwindawo ekuthiwa yi-hammock okanye ubumnandi echibini okanye kwindawo yokudlala (yabucala). ILUNGELE IOFISI YAKHO YASEKHAYA ENENTO YOKWENZA NOKUZONWABISA nokuzonwabisa NENTSAPHO
Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwii-qts eziyi-3, ipuli, indawo enengca enendawo yokudlala, imithi yeziqhamo, igumbi lomdlalo: iping-pong, ipuli, iChase kunye nemiqamelo kunye neGazebo kunye nezitulo. Indawo yeGourmet kunye neBarbecue Grill.
Ukonwabela amandla ale ndawo incinci yokuvakala kweentaka kuyabangela umdla!
INDLU EFLETSHE ENE-WI-FI NGAPHAKATHI KONDOMINIUM (akukho zinyuko)
Zonke iifoto ZISEKHAYA KUPHELA
-I-WIFI ifayibha optic enesantya esiphezulu
*I-Lagoon ibucala kwaye ikhethekile kwi-condominium kwaye ikwi-100m ukusuka kwindlu*
> IKHISHINI lizaliswe zizitya:
- Isitovu nge-oveni
- Umenzi wekofu yombane
- Isipheki serayisi sombane
- Iipani zobukhulu obahlukeneyo
- 3 iifriji
- Ibhotile ye-thermos
> YIZA neePOTI ZAKHO zePlastiki ukuze ugcine ukutya kwakho efrijini.
> AMAGUMBI ama-3 anesimo somoya :
Amagumbi okulala ama-3 onke anabalandeli besilingi kunye ne-air conditioning.
✓namagumbi okulala amabini aphindwe kabini ngaphakathi endlwini (i-1 kuwo inomabonakude)
✓igumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-1, iibhedi ezingoomatrasi kunye noomatrasi omnye ngaphakathi kwigumbi lemidlalo elinefriji kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo.
I-TV ye-Led ye-1 (iitshaneli ze-cable TV), izihlalo zengalo, isibuko, imizobo
> AMAGUMBI ama-3
Igumbi lokuhlambela eli-1 ngaphakathi endlwini
Igumbi lokuhlambela eli-1 kwindawo yedama
Igumbi lokuhlambela eli-1 kwigumbi lemidlalo
>ISHOSHASHA ezi-4 - 2 UKUBA NOMbane
1 kwigumbi lokuhlambela loluntu
1 kwigumbi lokuhlambela kwigumbi lemidlalo
1 kwigumbi lokuhlambela ecaleni kwedama
Ishawa e-1 kufutshane nedama
- I-Barbecue nge-skewer grill - iibhodi kunye ne-tray yenyama
-Igumbi lemidlalo elinabalandeli besilingi ezi-2, iifriji ezi-2, iitafile zeping pong, itafile yepool, iirakethi kunye nebhola yokukhwela.
- UKUPAKA abantu abadala kunye nabantwana
- Idama lokuqubha elinezibane ezikhethekileyo ebusuku
- IGazebo enetafile, iisofa kunye neecushion
- Chaise ngemiqamelo emininzi
- 3 Networks
- Umhlaba onengca othe tyaba kunye nemithi ene-1,080 yeemitha
ngezibane ezikhethekileyo zasebusuku
*** QAPHELA: Isilwanyana sakho sasekhaya siya kuhlala samkelekile, KODWA KUYIMFUNEKO xa usenza UKUBEKA UKUBA UKWAZISE PHAMBI kokufika kwayo kwaye uqaphele imigaqo emiselweyo, ngaphezu kokwazisa: ubungakanani, ubudala, ubunzima kunye nohlobo.
4.91 · Izimvo eziyi-90
I-DRY BEACH: "I-BRAZILIAN CANCUN"
UPraia Seca sisithili sesine sikaMasipala waseAraruama oseRio de Janeiro, eBrazil, eRestinga de Massambaba, phakathi kweLagoa de Araruama kunye noLwandlekazi lweAtlantiki. I-Restinga de Massambaba yi-12 km yomhlaba oyisanti, phakathi kwe-Saquarema ne-Arraial do Cabo. Kuba yindawo yolwandle oluhle kakhulu, isixeko sase-Araruama sathiya isithili "I-Cancún yaseBrazil". IMassambaba Environmental Preservation Area ikwalapho, ngenxa yokunqaba kwezityalo nezilwanyana kunye ne-ecological environments apho.
I-Praia Seca isingathe iminyhadala emininzi yezemidlalo, efana nokusefa umoya kunye nokuhamba ngephenyane, ukutsala abakhenkethi abaninzi kulo mmandla. Ngoku sesona Sithili siphambili se-Araruama kuKhenketho, esityelelwa minyaka le ngamawaka abakhenkethi abavela kwilizwe lonke nakwihlabathi liphela!
UMDA UKUSUKA ENDLENI UKUYA KWEZINYE IZIXEKO EZISELUHLENI (imoto):
I-Arraial do Cabo: 40min
UMDA UKUSUKA ENDLWINI UKUYA KUBHESHI lwase-PRAIA SECA (imoto):
Praia do Tome: 10min
I-Vargas Beach: 18min
I-Praia Seca Lagoon: I-15min
UMDA UKUYA E-PRAIA DECA CENTRINHO (imoto): 6min (Iivenkile zasekuhlaleni, iindawo zokugcina iziselo, iindawo zokutyela, iivenkile ze-ayisikrimu, iikhemesti, iimarike, ukuthenga izinto ezincinci. Kuyafaneleka ukukhumbula ukuba ezininzi zineenkonzo zokuhambisa.)
I-WINDSURF, KITESURF NE-SUP CLUB: 15min
Umbuki zindwendwe ngu- Vânia
✓Iindwendwe zam zamkelekile kakhulu kwaye zinokuziva zikhululekile ukunxibelelana nam ngemiyalezo kaWhatsApp.
✓Wonwabele amandla endlu kwaye uze uphumle kwaye uzivuselele!
✓ Phuma kwisiphithiphithi esisesixekweni, uze uyazi le Paradesi! ✓Indawo ezolileyo, enoxolo, apho iintaka kunye nendalo ziya kukushiya uhlaziyekile!
✓Wonwabele amandla endlu kwaye uze uphumle kwaye uzivuselele…